luxury – OOTDMYANMAR
Hermès BAGS WE LOVE AS SEEN ON #BURMESEFAIRYTALE
No Comments on Hermès BAGS WE LOVE AS SEEN ON #BURMESEFAIRYTALE
Though we mostly see the #girlboss (behind the beauty brands Bella & Hearty Heart cosmetics) wearing her comfy hoodies and sweat pants we cannot deny the fact that she has impeccable taste for fashion. From her designer shoes, to her Christian Dior bags, and of course her Hermès bag collection. So we’ve rounded up our favorite Herme’s bags we’ve seen on her instagtram.
သက်သောင့်သက်သာရှိတဲ့ hoodie တွေ sweat pant တွေနဲ့ မကြာခဏမြင်တွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ #grilboss တစ်ဦးဖြစ်သူ (Bella နဲ့ Hearty Heart ရဲ့ပဲ့ကိုင်ရှင်) က ဖက်ရှင်နဲ့ပက်သက်ရင် တမူထူးခြားစွာ ဝတ်စားဆင်ယင်တတ်တာကိုတော့ လက်ခံကြရမှာပါ။ သူမရဲ့ designer shoe တွေ၊ Chiristian Dior နဲ့ hermés လက်ကိုင်အိတ်တွေကလည်း သူမနဲ့လိုက်ဖက်စွာပဲ အားလုံးရဲ့အမြင်ကို ဖမ်းစားထားပါတယ်။ instagram မှာ မကြာခဏမြင်ရလေ့ရှိတဲ့ သူမရဲ့ Hermès bag collection တွေထဲက OOTDMYANMAR ရဲ့ အနှစ်သက်ဆုံး collection တွေကို ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Photo Credits @burmesefairytale Top from @mdsmyanmar
The Constance bag, popularized by Jackie Kennedy, isasuperbly versatile shoulder bag and is far more difficult to source than other bags.
Jackie Kennedy ကြောင့် ရေပန်းစားခဲ့တဲ့ Constance အိတ် က ဘယ်လိုအချိန်အခါမှာဖြစ်ဖြစ် လိုက်ဖက်တဲ့ shoulder bag တစ်ခုပါ။
Photo credits @burmesefairytale
The cream of the crop of Hermès bags, Birkin are chic, timeless and highly sought after making them the most popular of the designs.
Hermès ရဲ့ အကောင်းဆုံး collection တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Birkin အိတ် ကိုလည်းချန်ထားလို့မရပါဘူး။ စတိုင်ကျပြီး ဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ် ရိုးမသွားတဲ့ဒီအိတ်က ရေပန်းအစားဆုံးဖြစ်ပြီး ဝယ်ယူချင်တဲ့လူတွေလည်း အမြောက်အမြားရှိနေပါတယ်။
Photo credits @ burmesefairytale
As seen on her the Himalaya Hermès
သူမ ဆီမှာမြင်တွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ Himalaya Hermès
What makes this bag so expensive?It’s the most time-consuming of all Hermès Birkin bags and it’s produced in the most limited numbers only.
ဒီအိတ်က ဘာကြောင့် ဈေးကြီးနေရတာလဲ။ Hermès Birkin အိတ်တွေထဲမှာ ထုတ်လုပ်ချိန် အကြာဆုံးဖြစ်ပြီး အရေအတွက်အကန့်အသတ်နဲ့ပဲ ထုတ်လေ့ရှိတာကြောင့်ပါ။
Though Birkin is the signature of Hermes, Kelly has become hugely popular due to its slender shape and strap design making it easier to carry.
Birkin က Hermès ရဲ့ သင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုပေမယ့် Kelly က လည်း သွေးသွယ်ပြီး သယ်ရလွယ်ကူတဲ့ ဒီဇိုင်းကြောင့် အတော်လေး လူကြိုက်များ ရေပန်းစားလာပါတယ်။
With its signature pyramid studs this giveamore rock & roll feel to any outfit.
Medor ရဲ့ အမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ pyramid ပုံစံ stud ကြောင့် ဘယ်အဝတ်အစားနဲ့မဆို လိုက်ဖက်ပြီး ယုံကြည်မှုရှိစေမယ့်ခံစားမှုမျိုးရရှိစေမှာပါ။
For something casual and functional this bag is ideal.
Evelyne ကတော့ ပုံမှန် ထသွားထလာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပွဲတက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့မဆို လိုက်ဖက်နေပါတယ်။
#6 JIGE CLUTCH
With it’s chic H design, it definitely screams Herme’s.
Jige Clutch ရဲ့ စတိုင်ကျလွန်းတဲ့ H ဆိုတဲ့ စကားလုံးက Hermès ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကို သိသာထင်ရှားစေပါတယ်။
Tags BURMESE, burmesefairytale, Fashion, luxury, mdsmyanmar, myanmar, ootdmyanmar